Inona no antsoinao hoe olona mandeha bisikileta? - Bisikileta
Tena > Bisikileta > Ny olona bisikileta - mamaly ireo fanontaniana
Ny olona bisikileta - mamaly ireo fanontaniana
Inona no antsoinao hoe olona mandeha bisikileta?
RAHAmitaingina ianaonybisikileta, mety ho ny anao koaantsoina hoenybisikileta.ianareomety hoantsoina hoebisikileta, bisikilety, na bisikileta.
Etsy ankilany, antsoina hoe fantsona midina io. Ity ny fork satria toa sahala amin'ny fork ilay izy, sy ny kodia ary ny zavatra rehetra. Ity ny cassette any aoriana misy girara ary misy ny rojo vy eo aloha.
Ary izany dia manome fotoana fohy ny bisikileta, ary tena ilaina izany satria manome anao mandanjalanja. Ary avy eo mahatsiaro ho milamina. 'tohizo ary daka kely i Brian ary avy eo atsangano ny tongotrao, andao hojerentsika ny fomba ahafahany manangana ny tongony tahaka izany? Ny tiako holazaina dia tsy mandeha an-tongotra na inona na inona izy fa mahatsapa fandanjalanjana.
Mianatra mandanjalanja àry izy ary izany no dingana voalohany rehefa miezaka mianatra môtô ianao. Uh, tohizo ary tazomy i Brian eto, andao handeha. Tsy mitaingina haingam-pandeha izy ka tena mila mampiasa freins, azony atao fotsiny ny mampidina ny tongony, ary raha mihafaingana izy dia hanomboka mamboatra satria ity no karazana bisikileta azonao ahemorana.
Ary io no freins tsara indrindra ary afaka miala ianao. Um, koa raha manomboka mihetsika ianao dia mety hianjera rehefa mihetsiketsika ilay ao aoriana, azonao atao ny misintona azy ao aorianao. Hampihatra ny mandaka izy nefa amin'ny tongotra iray ihany. Ary apetrany amin'ny pedal ilay tongotra iray hafa.
Mitovy amin'ny scooter daka izany, ny tongotra iray ambony ary ny iray kosa daka. Azafady, fantatrao fa eny amin'ny làlana tsy dia be loatra no anaovanay izany ka azo antoka tsara. Manana ny fiarovan-dohany izy.
Mandrosoa hanapaka ho ahy any ka mbola nampiasainy kely ny tongony fa ny freins no nampiasainy. Ka izy no mamolavola ny toe-tsaina ilainao mandeha bisikileta. Ary toy ny, ara-bakiteny 'Oviana ianao no nanomboka nandalina, Brian?' >> Brian: 20 minitra >> Fitsarana: '20 minitra 'ka vetivety fotsiny izahay eto dia manao fanazaran-tena any ivelany ary nanapa-kevitra ny haka ny fakantsary aho.
Fa tena mahafinaritra izany, toy ny ao anatin'ny 20 minitra dia afaka mandeha sambo ianao amin'ny ankapobeny. Heveriko indray fa tena zava-dehibe ny manomboka amin'ny fananana habe bisikileta mety. Ary avy eo mivoatra koa ireo toetra ireo.
Satria 'nianjera ve ianao?' >> Brian: Tsia >> Fitsarana: Tsia, tsy nianjera mihitsy izy. Tsy misy rangotra, tsy misy tahotra namboarina, ahoana ny fandanjana.
Fantatrao fa mianatra izy! Mahatsiaro tena ho tianao ve ianao, mametraka ny tongotrao amin'ny pedal ary manandrana mamindra? Ie! Andao handeha ity no voalohany, ity no Brian voalohany ara-bakiteny! Mandrosoa ary apetraho ny freins, tsy maintsy manamboatra freins isika.
Ny freins amin'ny tananao
Jereo fa manana ny voajanahary amin'ny tongotra izy. Jereo ity! Avereno avereno. Ie, tsara be! Vita tsara. ..
Haha! Andao handeha, okay, jereo. 'Mbola manangana ireo fahazarana ireo izahay. Saingy, fantatrareo fa dimy minitra eo ho eo izahay.
Ity ny fivelomanao dimy minitra momba ny fomba bisikileta. Ilay bisikileta habe mety indray, mampihatra ny mizana nefa tsy mandeha am-paingotra, mihatsara kely amin'ny fananganana tongotra iray ambony ary amin'ny fampiasana ilay iray hafa toy ny scooter ary avy eo mampihatra frein. Ary avy eo dia mitaingina bisikileta ianao amin'ny ankapobeny.
Ka manaova fialam-boly, alao antoka, mitafia ny fiarovan-dohanao sy izany rehetra izany ary eny, eny! ut any. Ity dia fomba tena tsara hivezivezena. Sady ara-pahasalamana no miorina amin'ny fiaraha-monina ary tena mahafinaritra fotsiny.
Inona no dikan'ny hoe mandeha bisikileta ny olona iray?
izanydia midika hoeny fiatrehana ny famoizam-po sy ny fitazonana ny toetra tia ady amin'ny lafim-piainana rehetra.Bisikiletadia mihoatra ny fanatanjahan-tena na fialamboly fotsiny, fa fomba fiaina sy zavatra manova fiainana andraisana anjara.Bisikiletadia fiainana. Richard Stripes.
Olona maro be. Azoko antoka fa mijery lasely bisikileta aho ary mieritreritra fa tsy hoe tsy mahazo aina fotsiny izany, fa mety ratsy aminao koa. Fantatrao - miteraka fahasimbana, fanaintainana, fahakiviana ary, amin'ny lehilahy, mety tsy fahatomombanan'ny erectile, angamba homamiadan'ny prostaty.
Nefa maro amintsika no mandeha bisikileta ary tsy manana olana velively. Ny mpitaingina bisikileta kosa, manao an'izany. Manana aho, ka afaka milaza aminao aho fa rehefa misy zavatra mitranga dia tena manahy.
Ho fantatrao, azoko antoka fa rehefa mitaingina ny filahanao sy ny testicle dia miafina tsara matetika. Ny faritra misy sela malemy eo anelanelan'ny vodinao sy ny testisinao dia antsoina hoe perineum anao ary rehefa mandeha bisikileta ianao dia mifandray amin'ny lasely ity faritra ity. Eo ambanin'ny hoditra no misy ny uretrao, izay fantsona mampifandray ny tatavia amin'ny tontolo ivelany amin'ny alàlan'ny filahiana.
Noho izany dia toe-javatra namboarina nitaingina bisikileta ary rehefa afaka 30 minitra dia nivoaka aho ary hitako fa vetivety dia tsy nisy fahatsapana mihitsy tamin'ny penisako, izay tena mandeha tokoa, satria fantatrao fa niverina ilay fahatsapana. Ka amin'ny faran'ny andro dia mieritreritra aho fa tsy nisy zavatra nitranga tamin'ny fotoana maharitra, fa inona no mitranga ao anatin'ny fotoana fohy? Amin'ny ankapobeny dia noho ny tsindry apetrakao mivantana amin'ny perineum dia manindry ny nerve ianao ary manindry ny lalan-drà sasany ary izany no mahatonga ny tsy fahatomombanana. Rehefa tapitra ny fotoana hipetrahana eo amin'ny nerveo dia haka fahasimbana madinidinika izay tsy fahavoazana maharitra, amin'ny ankapobeny dia miteraka fahamaimaizana eo amin'ny faritra anompoany, izany no nanjo anao.
Fantatro bebe kokoa noho ny nataoko, mahazo bisikileta mety ianao ary misy olona mijery ny lasely sy izay rehetra miaraka aminy. Raha mandeha bisikileta mandritra ny fotoana lava ianao ary isaky ny tsy maninona ao amin'io faritra io ary mijanona ho moana ary avy eo dia manao zavatra mitovy hatrany hatrany ianao dia tsy azo ihodivirana ny fahavoazana maharitra, fa ny fahaiza-misaina kosa no mitaky ary rahoviana mitranga izany avy eo maka fotsiny ny mety bisikileta mety sy ny lasely mety. Ny vanim-potoana iray manjavozavo aorian'izay dia tsy hiteraka fahasimbana maharitra amin'ny fahatsapana amin'ity faritra ity na ny fananganana ary ny toy izany.
Ny lohahevitra manaraka dia ny tsy fitrangan'ny erectile ary mifototra amin'ny efa henontsika momba ny tsy fahampian-tsofina, misy rohy ve eo amin'ny bisikileta, ny tsy fahatomombanana miverimberina izay mitarika amin'ny tsy fetezan'ny erectile? Ny tena zava-dehibe dia ny maha-zava-dehibe ny tsy fetezan'ny erectile aloha. Ny fizotrany izay mitarika amin'ny olan'ny fananganana dia mitovy tanteraka amin'ny fizotrany mitarika aretim-po, izay mitarika aretim-po. Ka raha voan'ny diabeta na tosidra ambony ianao na mifoka sigara, dia azo inoana fa voan'ny erectile ianao, nefa mety ho voan'ny aretim-po koa ianao.
Ny tena marina dia hanomboka bisikileta ny ankamaroan'ny olona antonony. Raha izao, raha mpitaingina bisikileta ianao ary efa manana vanim-potoana tsy mampiorina ny erectile, ny eritreritrao voalohany dia tsy tokony hoe, 'Oh, ity no lasely noho ny bisikileta.' Tokony hitrako tsy handevina ny lohako amin'ny fasika izany dia mety ho famantarana zavatra tsy mbola voamarina.
Mila manana an'io fizahana io aho. Toa azonao antoka fa sarotra ny mametraka karazana fahasimbana amin'ny nerveur pubic anao izay mety hitarika erectile erectile. Ka sarotra ve izany? Izany fahatsapana fahanginana mahatsiravina misy fiatraikany amin'ny perineum izany dia tsy hanome anao fihenan'ny erectile.
Raha ny marina dia tsy hanome anao disfta erectile izy io. Mandehana ary jereo izany. Voalohany, ny fananana MOT araka ny fijerin'ny fony, dia maninona raha manana fitsaboana olana amin'ny fananganana? Midika izany fa feno ny faribolana.
Soa ihany fa tsy misy fiatraikany amin'ny homamiadan'ny prostaty ny bisikileta. Saingy tsy ny fivoaran'ny homamiadan'ny prostaty ihany, fa ny fanontaniana ihany koa ny fisavana tsy ho amin'ny homamiadan'ny prostaty. Ny iray amin'ireo zavatra ampiasainay mba hanondroana ny risika homamiadana prostaty dia ny fanaovana fitsapana ra ary misy ny fiheverana fa raha mandeha bisikileta betsaka ianao dia mety hampahatezitra ny prostaty anao ary mety io ny fitsapana ra-nao izay antsoina hoe PSA antsoina hoe mampiakatra ra artifisialy. manandrama fitsapana ra antigen manokana prostaty izay tonga amin'ny fotoana nanaovanao io fitsapana ra io nisondrotra tamin'ny fomba artifisialy ary avy eo dia manana fitsapana maromaro izay tsy nilainao mihitsy satria nandeha bisikileta ianao ary tena tsy marina izany, tsy izany - misy vintana mety hisy fiantraikany kely ihany izany, fa raha mijery ny fikarohana mifototra amin'ny laboratoara amin'ny maro ianao, maro ny marika molekiola ho an'ny homamiadan'ny prostaty, bisikileta ary manao fanatanjahan-tena dia tsy misy mahasamihafa ireo mariky ny homamiadan'ny prostaty, noho izany dia tsara ny bisikileta. manatsara ny fahasalamanao kardia ny zavatra rehetra mampihena ny risika homamiadana anao ary tsy misy fiantraikany amin'ny fizahana homamiadan'ny prostaty tsy mety izany.
fanatanjahantena plank ab
Ka rehefa mihalehibe isika dia avo kokoa ny mety ho voan'ny homamiadan'ny prostaty. Ny zavatra voalohany tokony hataonao izao dia ny mahatsapa ny sasany amin'ireo soritr'aretina ankehitriny, ny zavatra tadiavintsika dia ny zavatra toy ny soritr'aretin'ny rano, ny fanaintainan'ny lamosina, ny olana amin'ny fandehanan-dra ao anaty rano, ireo karazan-javatra ireo, raha manahy ianao ireo zavatra ireo, raha miaina ireo zavatra ireo ianao avy eo dia tokony hahita dokotera urologist na dokotera ao amin'ny fianakaviana ianao ary hanana adihevitra mirindra momba ny fanombanana. Tsy midika izany fa ho voan'ny homamiadan'ny prostaty ianao, fa io dokotera manokana io dia hitety anao amin'ireo zava-tsoa amin'ny fanadinana ary angamba ireo lafiny ratsy amin'ny fanadinana.
Noho izany ary miaraka amin'ny ahy amin'ny fanazaran-tenako dia manana sary diso be aho. Noho izany dia manana fanazaran-tena lehibe izahay ka hisy marary manodidina ny 30 taona ka hatramin'ny faha-80 sy 90 an-tsaina an'izany, ary raha misy soritr'aretina mampiahiahy dia aza mikoropaka, aza aleveno ao anaty fasika ny lohanao ary mitadiava fifanakalozan-kevitra mety. ary fanombanana ny olana, raha misy saina mena hihetsika ary raha ilaina izany. Ka tsy misy ny fifandraisana misy eo amin'ny bisikileta sy ny homamiadan'ny prostaty, fa ny homamiadan'ny prostaty dia olana lehibe amin'ny ampahany betsaka amin'ny bisikileta. Satria lehilahy izy ireo, antonony izy ireo ary mila mieritreritra an'izany. Tsy haiko ny momba anao, fa ny fakana ahy lehibe indrindra tamin'ity resaka nifanaovako tamin'i Anthony ity dia mety tsy tokony hataontsika ambanin-javatra ny fahasalamantsika, tokony hiatrika ny fahafatesantsika isika ary hitady fanampiana rehefa mila izany isika satria tsy mahazo gs mahia dia marina Raha ny marina, ny Ny olana lehibe indrindra atrehintsika rehetra izao, mety nandalo fampahalalana somary be loatra aho rehefa nilaza taminao ny momba ny penisako tsy misy tomika ao anaty tionelin'ny rivotra, saingy mieritreritra aho amin'izany fa angamba tokony hiezaka ny hanao resadresaka miaraka amin'ireo namantsika angamba isika rehetra. ny klioba izay mitantana azy amin'ity faran'ny herinandro ity farafaharatsiny mba miresaka momba an'ity lahatsoratra ity heveriko fa toerana tsara hanombohana.
Ankehitriny koa, azafady mba alao antoka fa manome ahy ankiben-tànana lehibe hisaorako an'i Anthony tamin'ny fotoanany sy ny zavatra niainany tsy zaka, ary raha te hahita lahatsoratra hafa amin'ity lohahevitra ity ianao. Manana iray fotsiny amin'ity fantsona ity izahay izay hanampy anao hividy lasely mety aminao hiatrehana ny olana voalohany amin'ny lohalika.
Antsoina hoe bisikileta na bisikileta ve?
Bisikileta, koaantsoina hoe bisikiletanamitaingina bisikileta, dia ny fampiasana nybisikiletaho an'ny fitaterana, fialamboly, fanatanjahan-tena na fanatanjahan-tena. Olona nirotsakabisikiletadia antsoina hoe 'mpitaingina bisikilety',' bisikileta bisikileta ', na'bisikileta'.
Mahasalama ny mandeha bisikileta ve ny tovovavy?
Ny fanadihadiana vaovao dia mampiseho izanymitainginaamin'ny lasely mahazatra dia manimba ny firaisana ara-nofoFAHASALAMANAtsy amin'ny lehilahy ihany, faVEHIVAVYkoa. Raha tianaobisikiletaary ianao diaVEHIVAVY, mitady vaovao ratsy ianao: mety hanimba ny firaisana aminao izanyFAHASALAMANA. Ny fandinihana farany natao dia nijery manokana momba ny ahoanabisikiletamisy vokany amin'ny fanaintainana sy ny fahatsentsenan'nyVEHIVAVY.
ity lahatsoratra ity dia ho an'ny vehivavy miala tsiny zazalahy amin'ny maha-vehivavy azy dia mety ho sarotra ny mitaingina bisikileta indraindray miato ny natiora ohatra ny lehilahy tsy maninona fa eto aho hanampy ato amin'ity lahatsoratra ity dia hanome torohevitra sy tetika vitsivitsy momba ny fomba ahafahanao mitaingina bisikileta somary milamina kokoa noho i Neny atombohy amin'ilay iray izay tena miahy ny fampiononana amin'ny bisikiletanao raha tsy mahazo aina ianao amin'ity faritra ity, dia ho sarotra be aminao ny mankafy ilay bisikileta, tsy misy lasely mety aminy ianareo rehetra dia miasa tsara ho an'ny olona iray ary mety hijaly mafy ho an'ny olon-kafa izany, saingy maro ny lasely isan-karazany azo alaina, ao anatin'izany ny lasely voafaritra manokana momba ny lahy sy ny vavy. Mety mila manandrana lasely vitsivitsy ianao hahitana ilay mety aminao. Aza manalavitra ny fihevitry ny lasely - ny lasely toy ity, na ny lasely tena malalaka, dia afaka mahazo aina be ho an'ny vehivavy sasany; mankarary isaky ny mandeha bisikileta ianao isaky ny mandeha bisikileta, fa arakaraky ny anaovanao no tsy maharary azy rehefa zatra ny hozatrao, matokia ahy ary faharoa, aza avela hampatahotra anao ny zavatra bisikileta manokana an'ny olona.
Ohatra, ny vehivavy sasany dia aleony fohy ny lehilahy na sadelin'ny lehilahy. Ny pataloha bisikileta tsara dia hahatonga ny nify fampiononanao ho lafo kokoa. Ny vokatra dia tsy midika hoe tsara kokoa izy na ho an'ny Asa, miankina amin'ny safidinao manokana Manasa ny kilaotyo isaky ny mitaingina sy mampiasa crème chamois hiteraka raha handeha mitaingina be amin'ny orana ianao dia mety ilaina ny mampiasa vola amin'ny sasany. mpiambina fotaka mba tsy hitehirizana ny ratra sy fihazonana ny tongotrao sy ny fihoaram-pefy, ny fahafinaretana shami dia tsy mahafinaritra, fa any Wales kosa tsy dia ny olana satria mahafinaritra foana rehefa hitan'ireo vehivavy tsy mahazaka toetr'andro fa somary mahazo aina kokoa ny mipetraka lavitra kokoa. ny lasely ka misy tsindry bebe kokoa amin'ny vodin-dohanao ary kely kokoa ny tsindry amin'ny faritra mora tohina rehefa manana olana ianao amin'izany Ny fananana fampiononana amin'ny bisikileta dia mety mendrika ny ahazoana môtô bisikileta Tokony ho fantatrao ny fomba fanitsiana ny toerana misy anao Eritrereto hoe aiza ny ny teboka fanerena dia mandritra ary aorian'ny mandeha tsirairay Mba hanaovana izany, aondriho mihemotra ny laselyo na ahodiho kely.
Tsara raha maka multitool miaraka aminao isaky ny mandeha ianao mba hahafahanao manitsy ny toerana misy anao rehefa any ivelany sy manodidina ianao. Ity angamba no hitan'ny maro fa sarotra indrindra raha ampitahaina amin'ny hoe eo afovoan'ny toerana ianao ary tsy misy ratsy kokoa noho ny manala sosona efatra hankanesana any amin'ny trano fidiovana, indrindra amin'ny volana ririnina dia mila jiro maninona aho no mila mihazakazaka Any dia fomba vitsivitsy samihafa hisorohana ny fanesorana ireo sosona rehetra ao aminao, ny voalohany dia ny fananana bibikely fohy tsy misy fehy bib izay hanamorana azy kokoa fa aza manahy raha manana fehy bib ianao dia misy fika hafa vitsivitsy izay Azonao atao koa ny manandrana, ilay voalohany dia tena nalaiko tamin'ny mpiara-miasa amiko taloha teny amin'ny arabe izay ahodinanao ny tongotrao fohy ary avy eo sintominao mankany amin'ny sisiny. Tsy mbola nanandrana ireo aho ary noho ny antony mazava tsy hanehoako azy ireo anio dia sintomy ao ambanin'ny akanjonao ny kiraronao bib, ka alaivo eo ambanin'ny akanjonao Tosory ny ilany iray amin'ny pataloha fohy ary avy eo ny ilany midina ary avy eo ny Biby fohy dia afaka midina malalaka, saingy tsy azoko antoka hoe ahoana no ahafahako mamerina azy io nefa tsy manala ny akanjoko.
Mbola mandeha ny asa. Misy kilaoty fohy novolavolaina ho an'ireo vehivavy misy zipper ao an-damosiny na tadiny azo esorina mba hahamora ny fahafantaran'ny vehivavy fa ny bisikileta fitsaharana voajanahary dia fanatanjahan-tena ara-tsosialy lehibe izay tiako kokoa noho ny mivoaka miaraka amin'ireo namako sy ny fisotroana kafe any amin'ny kafe ary cakeit dia tsara, fa tena zava-dehibe ny fananana zavatra kely hohanina sy hosotroina ary matetika amin'ny bisikileta matetika no fihinako isaky ny 45 minitra toy ny bar energie na akondro mba tsy ho lany hery rehefa manana klioba bisikileta eo an-toerana maninona g Raha tsy mandeha ianao ary mandray anjara amin'ny iray amin'ireo fivorian'izy ireo na mitaingina vondrona toa an'ity, ny vondrona tena mpinamana anay dia aza matahotra fa misy ihany koa ny klioban'ny bisikileta voatokana ho an'ny reny toomy maman nanomboka bisikileta taona vitsivitsy lasa izy ary izy dia iray amin'ireto vondrona ireto, miaraka amin'ny tanjon'ny fahazoana vehivavy bebe kokoa amin'ny bisikileta, na manao ahoana na manao ahoana ny halehiben'ny fahaizany, ary tena tiany ny hijaly satria tsy nampatahotra ahy fotsiny izany, fa fomba tsara hanatsarana ny tenanao tokoa haingana nefa tsy tena Fanamarihana Ary raha manana mekanika ianao ical na puncture, olona iray ao amin'ny vondrona no hanampy anao foana, raha toa ianao ka vaovao amin'ny bisikileta, manandrama mitady làlan'ny bisikileta tsy misy fiara toa an'io mba hananganana ny fahatokisanao sy ny tanjanao tsy misy anao Hanahy momba ny fifamoivoizana na fiara ianao, dia rehefa ianao mahazo aina ianao, azonao atao ny mandroaka sy miatrika fiakarana lehibe eny an-dàlana, maniry izany na ataovy anaty bun toy izao mba hahazoanao fandresena aero ary rehefa mivoaka ianao, dia alao antoka fa hizara ny toerana misy anao amin'ny fianakavianao na ny namanao ianao fantaro hatrany fa voaro ianao, misaotra anao nahita fanantenana rehetra fa nanampy anao hanome toro-hevitra sy fika vitsivitsy ity lahatsoratra ity. Raha manana ny toro-hevitrao manokana izay tsy nolazaiko aho dia zarao aminay amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany
Aleo bisikileta ve toy ny jogging?
Amin'ny ankapobeny,mihazakazakamandoro kaloria bebe kokoanoho ny bisikiletasatria mampiasa hozatra bebe kokoa izy io. Na izany aza,bisikiletamalefaka kokoa amin'ny vatana, ary mety ho vitanao ela kokoa izanynaHaingankaingananoho nyafaka mihazakazaka ianao.
Inona no mahasamihafa ny bisikileta sy ny bisikileta?
ANDININ-fahasamihafana: TOtsingerin'nydia manondro fizotran'ny fihodinana tsy tapaka, dia karazana motera izay mety ho roa na efatratsingerin'nyendrika, raha ilay manana roatsingerin'nyendrika antsoina hoebisikileta. nybisikiletadia fiara mandeha herin'olombelona, ​​mandeha pedal, mandeha tokana misy kodiarana roa, ny iray ao ambadiky ny iray hafa mifatotra amin'ny frame.
Manamontsana ny tongotrao ve ny bisikileta?
Ny tombony azo avy amin'ny fandoroana kaloriabisikiletafanampiana homahianytongotra, na dia mandoro kaloria avy amin'ny lafivalon'ny vatanao aza ianao. Mba hahazoana antoka fa mampiasa ny hozatry ny tongotrao ianao amin'ny fananganana faharetana izay mametaka ny tsingerin'ny tavy eo anelanelan'ny 80 sy 110 revolisiona isa-minitra (rpm). Haingam-pandeha ity.06.06.2019
Manome anao vavony fisaka ve ny bisikileta?
Ie!Afaka bisikiletaVonjeoianareohahazoana akibo fisaka. Saingyianao dia afakamandoro ny tavy eo am-pitobisikileta.Bisikiletadia fampiofanana mandoro kaloria mahafinaritra olona 130 kilaoafakamandoro kaloria efa ho 600 mandritra ny adiny iray amin'ny bisikileta mahery.
Eny,bisikileta afakaVonjeovery tavy kibo, fa iodiamaka fotoana. Ny fanadihadiana vao haingana dia nampiseho tsy tapakabisikiletamety hanatsara ny fahaverezan'ny tavy amin'ny ankapobeny ary hampiroborobo ny lanja mahasalama. nyhampihenakibo ankapobeny, fanazaran-tena aerobika mahery vaika, toy nybisikileta(na anatiny na ivelany), dia mahomby hampidina azytavy kibo.02.02.2021
Bisikileta ve ny bisikileta?
nybisikileta, antsoina koa hoe abisikiletanatsingerin'ny, dia fiara mandeha herin'olombelona na mandeha amin'ny herin'ny môtô, mandeha an-tongotra, mandeha irery, manana kodiarana roa mifamatotra amin'ny vatan-kazo iray, iray ao ambadiky ny iray hafa. nybisikiletampitaingina bisikileta dia antsoina hoe bisikileta.
Oviana no nanomboka nitaingina bisikileta voalohany ny olona?
Ny bisikileta dia nampidirina voalohany teto amin'ny firenena tamin'ny 1880, ary nandritra ny 1920 sy 1930 dia nanjary mariky ny fitoviana sy ny fahalalahana ny bisikileta. Ny olona avy amin'ny kilasy sosialy rehetra dia nanomboka nitaingina bisikileta - teny an-tanàn-dehibe handeha hiasa, ary tany ambanivohitra tamin'ny andro tsy fiasan'izy ireo.
Fa maninona no mandeha bisikileta foana ny olona any Danemark?
Firenena mpitaingina bisikileta Any Danemarka, ny olona bisikileta amin'ny karazana toetr'andro sy amin'ny andro rehetra amin'ny andro. Ampiasaina amin'ny bisikileta ny bisikileta, ny fivezivezena, ny fitaterana entana, ary ny fivezivezena ataon'ny mpianakavy, ary ny tambajotran'ireo làlan-bisikileta sy lalambe bisikileta dia manamora kokoa. Any Danemarka, ny bisikileta dia iray amin'ireo endrika fitaterana voalohany.
Fa maninona ny olona no milaza fa tsara ho azy ireo ny bisikileta?
Mazava ho azy fa misy antony hafa: ny fanamboarana ny kaloria entinao dia misy fiatraikany amin'ny faharetan'ny famenoana solika, toy izany koa ny kalitaon'ny torimasonao ary mazava ho azy fa ny habetsahan'ny fotoana laninao handoroana kaloria dia hisy fiantraikany amin'ny fahafinaretanao ny hetsika nofidinao. Raha heverina fa mankafy bisikileta ianao, dia handoro kaloria.